ရေပေါ်ငါးအစာများသည်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်. ၎င်းသည်လှောင်အိမ်ငါးမွေးမြူခြင်းဖြစ်စေ၊ ရေကန်ငယ်လေးဖြစ်စေမွေးမြူခြင်းဖြစ်စေ, ရေပိုက်ငါးမွေးမြူရေးသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းငါးမွေးမြူရေး, ရေပေါ်ငါးအစာသည်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. နောက်ကွယ်တွင်အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းမှာငါးအစာအများစုသည်အစာစားရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သူတို့က floating feeds တွေကိုနှင့်အတူကျေနပ်နေကြသည်.
ငါးများသည်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ရှင်သန်ရန်အတွက်အစာကျွေးသည်. ငါးမွေးမြူသူများအတွက်, ငါးနှင့်လိုအပ်သောအစားအစာအရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးအရရယူနိုင်ရန်အရေးကြီးသည်. တကယ်တော့, feed နီးပါးအဘို့အကောင့် 50% စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်၏. ထို့ကြောင့်, တောင်သူများသည်မှန်ကန်သောအစာကျွေးမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အချိန်နှင့်ခွန်အားများစွာလိုအပ်သည်.
စံပြငါးအစာကိုရွေးချယ်သည့်အခါ, အများကြီးအချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်. အရေးအပါဆုံး TYPE ဖြစ်ပါတယ်. စျေးကွက်တွင်ငါးအစာအမျိုးမျိုးရှိသည်. အစာအမျိုးအစားကိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မျိုးပွားအမျိုးအစားတို့ကအကျိုးသက်ရောက်သည်.
တောင်သူများသည်စားသုံးမှုအချိုးအစားကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီးကျန်ရှိသောအချိုးကိုအလွယ်တကူစောင့်ကြည့်နိုင်သည်. ရလဒ်အနေဖြင့်, အချိန်နှင့်လုပ်အားများစွာသက်သာသည်. လယ်သမားများသည်လိုအပ်သောအစာပမာဏကိုအလွယ်တကူတွက်ချက်နိုင်ပြီးအစာအလွန်များများ ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကူညီနိုင်သည်.
-နာမကိုအမှီအကြံပြုထားသည်, ရေပေါ်ငါးအစာကျွေး အချိန်ကြာမြင့်စွာရေပေါ်မှာဆိုင်းငံ့နိုင်ပါတယ်. အရည်အသွေးမြင့်မားသောအစာသည်ရေတွင်မျောပါနိုင်သည် 10 နာရီ. ဒီအစာကျွေးခြင်းအမျိုးအစား၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ရေနှင့်အစာကျွေးခြင်းရောစပ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ် 20% ပစ္စည်း၏. သို့သော်, ဤသည် floating feeds ကိုနှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါဘူး, သူတို့နေဆဲဆိုင်းငံ့နေကြသည်အဖြစ်. ရလဒ်အနေဖြင့်, သင့်ရဲ့ခွေးဖောက်လိုအပ်သောအစာအာဟာရကိုဆုံးရှုံးသည်မဟုတ်.
-ရေပေါ်ငါးအစာများသည်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်. ၎င်းသည်လှောင်အိမ်ငါးမွေးမြူခြင်းဖြစ်စေ၊ ရေကန်ငယ်လေးဖြစ်စေမွေးမြူခြင်းဖြစ်စေ, ရေပိုက်ငါးမွေးမြူရေးသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းငါးမွေးမြူရေး, ရေပေါ်ငါးအစာသည်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. နောက်ကွယ်တွင်အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းမှာငါးအစာအများစုသည်အစာစားရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သူတို့က floating feeds တွေကိုနှင့်အတူကျေနပ်နေကြသည်.
•လူငယ်ငါးများ၏ granules တည်ဆောက်ပုံသည်အလွတ်ဖြစ်သည်, ကအစာကြေဖို့လွယ်ကူသည်.
ငါးငယ်များသည်သူတို့ကိုအလွယ်တကူစားနိုင်ပြီးမည်သည့်အခက်အခဲမှမပါဘဲအစာကြေနိုင်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ၎င်း၏အလတ်ဆတ်မှုနှင့် porosity သည်စုပ်ယူရန်လွယ်ကူစေသည်. လေ့လာမှုများအရ floating ငါးအစာသည် FCR နှုန်းနှင့်အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုမှုနှုန်းကိုသေချာစေနိုင်သည်.
မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောသိုလှောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်, အစာကျွေးခြင်း၏ဤအမျိုးအစားအတွက်အစိုဓာတ်ကိုအကြောင်းအရာအလွန်နိမ့်သည် (ထက်နည်းသော 10%). ၎င်း၏အနိမ့်အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့်, မပျက်စီးနိုင်ပါ.